rongony – Midi Madagasikara
Toliara : Tovolahy mamon-drongony nandidy tena tamin’ny antsy
Redaction Midi Madagasikara 15 avril 2014 rongony, Toliara, Tsimenatse
Hafakely ! Lehilahy iray sahabo ho 25 taona voalaza ho mamon-drongony no nahavita nandidy sy nandratra mafy ny tenany tamin’ny antsy, ny asabotsy hariva teo, tao Tsimenatse Toliara. Nihosin-dra tanteraka ny tenany vokatr’ity famonoan-tena hafahafa ity. Ny tanany havia tatatataka, ny teo amin’ny kibony feno dian’antsy. Raha tsy nisy nanakana ity tovolahy ity dia efa lasa…